I-Nickel Ebhulashiwe Isiphathi Sombhede Wokugeza Esingabodwa | Oompompi Bezitsha Zokugeza
Ikhaya / Amanzi okugeza / Amafulethi Wokugezela Elingashintshiwe Owodwa / WOWOW Igumbi Lokugeza Izikebhe ompompi Abashayela I-Nickel
Ukuqoqwa kwesikulufu sokubeletha kukulethela ukuhlelwa okungaphelelwa isikhathi okubuye kucatshangelwe ngezindlela ezintsha ezintsha zezifunda zemisebenzi ehlukahlukene yokugezela. Thenga ompompi obekwe odongeni obekwe emaphepheni amaningi ahlukahlukene.
2321501 imiyalo yokufaka
Isikebhe sokugeza esitsheni esisodwa se-2321501
Lesi sibambo sompompi wokugezela sinikeza ukuvuselelwa kwesitayela endlini yakho yokugezela. Yenzelwe ngokucophelela ngobuciko, kepha nge-twist ecashile. Isibambo esisodwa esiyingqayizivele sepayipi lokugezela le-WOWOW sakhiwe ngejika eliphindwe kathathu, ngokuhlanganiswa nesiphetho se-nickel esine-brashi yakudala. Akusizi ngalutho ukuthi lesi sibambo sompompi wokugezela esisodwa siyisidonsa samehlo kunoma iyiphi indawo yokugezela, futhi ngokuqinisekile sizoba ngesinye sezici ezivelele zemihlobiso yakho yokugezela entsha.
Ucwaningo lukhombisile ukuthi ompompi bendawo yokugezela yizona zinto ezigxile kunoma iyiphi indawo yokugezela. Lokho kusho ukuthi ukunakwa kwanoma ngubani kudonswa ngokuzenzekelayo ompompi bendawo yokugezela. Imipompi eminingi yokugezela ingenye yezinto ezincane kakhulu emhlobisweni wakho wokugezela. Futhi-ke zinomthelela omkhulu ekuboneni ubukhulu bayo. Impela, ungangeza ukuthinta kobuhle kunoma iyiphi indawo yokugezela ngesibambo esisodwa sompompi wokugezela we-WOWOW. Abaqambi be-WOWOW bawuqonde kahle umthelela ompompi bendawo yokugezela, futhi ngenxa yalokho baklama ompompi bendawo yokugezela abangenza umehluko kunoma yikuphi ukuhlobisa.
Design yokugezela isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu
Ufuna indawo yakho yokugezela ibe isitayela futhi isebenze ngasikhathi sinye. Ngenxa yalokho, kufanele unqume ukuthi uzokhetha luhlobo luni lwephethenisi lokugezela. Njengoba kunezinhlobo eziningi zamapulangwe okugeza, kufanele uqale ubheke isikhala esikhona onaso, nokuthi yini oyithandayo mayelana nokulawulwa kokushisa kwamanzi. Ngabe ukhetha ukulawula izinga lokushisa lamanzi nevolumu ngezibambo ezi-2 noma ngeyodwa nje? Uma ukhetha isibambo esisodwa nje, isibambo sendwangu yokugezela esisodwa se-WOWOW kungenzeka kube yifenisi yokugezela enhle oyifunayo!
Lesi sibambo sokudonsa esisodwa sokugezela senzelwe zombili ukubukwa okusobala nokusebenzayo. Isibambo esisodwa esigoqiwe sitholakala kahle eceleni kwesihlalo sokugezela. Isikebhe esisodwa sokugezela seWOWOW sisebenza kahle. Umthamo wamanzi nokushisa kungalawulwa kahle ngesandla esisodwa. Isibambo esisodwa ngaphandle kokungabaza kulula ukusibamba nokusebenza. Ungavele usebenzise isibambo sesiphephe sokugeza ngasandla sinye ngokuyikhipha. Ngale ndlela ukugeleza kwamanzi okuguquguqukayo kuyasebenza. Ngokujikeleza isibambo esisodwa ungakwenyusa izinga lokushisa kwamanzi kalula futhi kahle. Ukuqanjwa kwe-patent yejika lamathathu e-US nakanjani kuyingqayizivele. Lokhu kwenza indawo yakho yokugezela ibe ngaphezulu kakhulu, ngenkathi uzuza kukho konke ukusebenza okukunikeza.
Isibambo esisodwa sekhishi lokugezela eliphezulu
Isibambo sepayipi sokugezela esisodwa sikaWOWOW senziwe ngethusi elikhulu futhi isiphetho saso se-nickel esenziwe ngomshini sapholishwa ngesandla futhi salungiswa. Ekuqedeni kwayo, i-WOWOW isebenzisa ubuchwepheshe besimanje ukunikela ngekhwalithi ephezulu nokuqina. Ngenxa yokuthi isibambo esisodwa sepayipi lokugezela le-WOWOW senziwe ngethusi eliqinile, le ompompi yokugezela enikezela ngezinto ezintsha ukumelana nomswakama ngakho-ke ukugqwala. Akusizi ngalutho, i-WOWOW inikeza isikhathi sewaranti seminyaka engu-3 sesibambo esisodwa saso sokugezela. Ubufakazi bokuthi i-WOWOW iyakholelwa kwikhwalithi yomkhiqizo wayo futhi ithatha isibopho ngokusebenza kwayo unyaka wonke.
Njengoba ukwakheka kwalesi sibambo sendlu yokugezela eyodwa kuhlukile futhi kunelungelo lobunikazi, futhi nezinye izinto ezisebenzayo azifani. Isibonelo i-aerator eyonga amanzi. I-Neoperl Aerator esebenza kahle yale faucet yesibambo sokugezela esisodwa inezici zokulawula ukuhamba kwamanzi okubushelelezi futhi okubushelelezi. Ngakho-ke ngeke uhlangabezana nokufafazwa kwamanzi. Ngaphandle kwalokho igcina ifike kuma-50% ekusetshenzisweni kwamanzi. Lokhu uzokuqaphela nakanjani kumthethosivivinywa wakho wamanzi. I-aerator ingasuswa kalula nge (ithuluzi) le-aerator. Ngale ndlela ungayihlanze kalula nje ngezikhathi ezithile, ukuze uqinisekise umuzwa omuhle kakhulu wokusebenza iminyaka.
Isithambisi sokugeza esisetshenziseka kalula
Okokuqala, ukuphela kwe-nickel okuhlanganisiwe kunikeza ukuthinta okuhle kunoma iyiphi indawo yokugezela. Ngaphandle kwalokho, ukuqeda okuseqophelweni eliphezulu kubuye kuphikise izindawo zamanzi, ukuncipha kanye nezimpawu zeminwe. Ngakho-ke kulula ukuyigcina futhi uyihlanze. Ungasula ngobumnene konke okusele ngendwangu emanzi ukwenza itafula lakho lokugezela libe linye licwebezele futhi elisha. Ukuhlanza ifenisha yakho yokugezela njalo kuqinisekisa nokukhuthazela kwempilo ende. Ngale ndlela izinsalela ezinzima azinalo ushintsho lokunamathela kufenisha yakho yokugezela. Ikakhulu, izinsalela ezinjenge chaki zingathinta isikulufu sakho sokugezela, uma zingahlanzwa njalo. I-WOWOW ikwenza kube lula lokho, ukuze ukwazi ukwenza lokhu ngaphandle komzamo.
I-valve ye-ceramic yesibambo esisodwa sepayipi lokugezela ikunikeza ukusebenza okungaconsi i-100%. Futhi ngaphandle kokunciphisa ukushelela ukusebenza. Le cartridge yekhwalithi ephezulu ihlolwe ngemijikelezo yamanzi engaphezu kuka-500,000. Futhi namanje isibambo esisodwa sombhobho wokugezela sikaWOWOW besisebenza ngokulula okufanayo. Futhi-ke kusalokhu kudonswa imali futhi kungavuzi. Cabanga ukuthi umbhobho wokugezela kungenzeka ungasetshenziswa ngaphezu kwezikhathi eziyi-10,000 XNUMX ngonyaka. Lokho kusho ukuthi ngesibambo sompompi wasendlini yokugezela isibambo esisodwa se-WOWOW uthenge ompompi bokugezela impilo yakho yonke. Ngakho-ke le ompompi eyodwa yokugezela ephethwe idlula wonke amazinga omkhakha!
Yenza isibambo sokugezela esisodwa sokugezela
Isibambo sendwangu yokugezela eyodwa kulula ukuthi ungazifaka ngokwakho. Ngeke udinge noma yiluphi udaka olubizayo! Ngakho-ke ungagcina futhi ezindlekweni zokufaka kakhulu. Le faucet yokugezela okwenzela wena ihlinzeka ngesethi ephelele yezesekeli namathuluzi wokufaka. Lokhu kufaka ipuleti yensimbi yensimbi, i-hoses yamanzi engu-20 inch Tucai enekhwalithi eqinisekisiwe, amagilavu ​​wokufaka, ithuluzi lokususa i-aerator, nokuningi.
Njengoba kushiwo ngenhla, i-WOWOW ithembela kakhulu ngekhwalithi yemishini yayo yokugezela. Ngakho-ke i-WOWOW ikunikeza isikhathi semvume yeminyaka emithathu. Uma isibambo sakho sendlu yokugezela esisodwa singasebenzi ngendlela okufanele sisebenze ngayo, uzonikezwa isibambo sendwangu yokugezela entsha sha ukuze ungene esikhundleni sakho. Futhi ngaphandle kwalokho, i-WOWOW inikeza isiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-3. Uma ubungeke uhlabeke umxhwele ngenani lemali i-WOWOW ekunika yona, uzokwazi
thola ukubuyiselwa kwemali okuphelele ngaphandle kwezindleko ezingeziwe, futhi ngaphandle kwemibuzo ebuziwe Elula njengoba!
 Umklamo onqunyelwe kathathu wase-US
 I-nickel eboshwe ngokuqondile
 Kwenziwe ngezinto ezisezingeni eliphezulu
 I-lever yesibambo esisodwa esiduduzayo
 Gcina amanzi aze afike ku-50% nge-aerator entsha
 Isikhathi semvume yeminyaka emithathu
I-SKU: 2321501 Categories: Amafulethi Wokugezela Elingashintshiwe Owodwa, Amanzi okugeza Tags: 1 Bamba, 1 Imbobo, isikulufu sokugeza
16.2 x 9.1 x amasentimitha angu-6